Akụkọ - Mmezi nke manifold na kpo oku
Villa na ụlọ gbatịrị elele akụkụ nrụgide hydraulic itule usoro ikpo ọkụ
AnyịOtu Sunflyna-emepụta ọtụtụ manifold nye ndị ahịa anyị kwa afọ, mgbe ahụ ka esi edozi manifold na kpo oku dị ezigbo mkpa, n'okpuru bụ ụfọdụ aro.
1.Hot mmiri maka oge mbụ
Mgbe oge ikpo ọkụ na-abịa, a ga-anwale ikpo ọkụ nke mbụ iji hụ ma ọ bụrụ na ọ dị mmiri mmiri ọ bụla. Nzọụkwụ a adịghị ụkọ ọbụna ma ọ bụrụ na a na-anwale ikpo ọkụ na nke mbụ. Mgbe a na-enye mmiri ọkụ, mepee valve mmiri na-enye isi. nke ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ala iji wepụ okpomọkụ. Okpomọkụ nke mmiri na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebili ma na-agbanye ya n'ime pipeline ka ọ na-ekesa. Lelee ma ọ bụrụ na ọ dị ihe na-adịghị mma na interface nke ala ikpo ọkụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ mepee alaka valves nke manifold. .
2. Akpa iyuzucha
N'ihi nrụgide na mmiri na-eguzogide mmiri na pipeline kpo oku, ọ dị mfe ịmepụta ikuku. Ya mere, na ọrụ mbụ nke geothermal, ọ dị mfe ime ka ọhụụ nke enweghị ikesa nke ọkọnọ na ịlaghachi mmiri na okpomọkụ na-adịghị mma. , ya mere ọ dị mkpa ikpochapụ otu loop site na otu akaghị. Usoro ahụ dị nnọọ mfe: mechie valvụ nloghachi nke kpo oku na nhazi ọ bụla nke akaghị aka nke ọ bụla, mepee valvụ na-achịkwa na manifold, wee mepee valvụ na-ekpochapụ na ọkpọkọ azụ azụ nke ala na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpochapụ mmiri na-ekpo ọkụ, na-agbapụ ya. Mechie valvụ a mgbe a tọhapụrụ ikuku, ma mepee valvụ ọzọ n'otu oge. A na-emepe, nke mere na usoro ahụ na-arụ ọrụ nke ọma.
3. Ntucha nhicha
Ọtụtụ ndị anaghị aghọta mkpa nke nzacha ihicha. N'okpuru nkịtị ọnọdụ, onye ọ bụla n'ala kpo oku manifold na-onwem na a nzacha. Mgbe e nwere ọtụtụ adịghị ọcha na mmiri, ihe nzacha kwesịrị ihicha na oge, ma ọ bụghị na outlet ọkpọkọ agaghị. dị ọkụ. Ọ bụrụ na ala adịghị ọkụ, a na-ehicha ya otu ugboro n'afọ.
Mgbe ị na-ehicha ihe, mechie valvụ niile dị n'ala ụlọ kpo oku, jiri ihe nrụnye nwere ike imeghe okpu njedebe nzacha n'aka elekere, wepụ ihe nzacha maka ihicha, ma tinyeghachi ya dịka ọ dị mgbe ihichachara.